Isebenza Kanjani Imikhiqizo ye-Red Emperor CBD & Delta 8 THC
I-Cannabidiol (i-CBD) iyi-cannabinoid eyenzeka ngokwemvelo futhi ingenye yezakhi eziningi ze-hemp. I-CBD iphephile ukuthi ingadliwa futhi ayisebenzisi ingqondo, iyigugu isikhathi eside ngemiphumela yayo ezuzisayo yezempilo ngaphandle kwemiphumela emibi yemithi kadokotela.
Inqubo yokukhishwa kweRed Emperor CBD ayinamakhemikhali futhi isebenzisa ingcindezi isikhutha (CO2) ukudonsa ama-phytochemicals (njenge-CBD) avela esitshalweni se-hemp. Inqubo yethu ayinawo ama-solvents amakhemikhali anokhahlo avame ukusetshenziselwa ukukhipha uwoyela CBD. Ukukhishwa kwe-CO2 kulunge imvelo futhi akunabuthi, kuthathwa njengeyona ndlela ephephe kunazo zonke yokukhipha izitshalo emhlabeni.
I-Red Emperor CBD isebenza namapulazi aqinisekisiwe e-FDA e-Colorado, California nase North Carolina. Sinikeza abalimi bethu be-CBD ama-hemp clones ngezakhi zofuzo ezihlukile ukuqinisekisa ukuthi bakhiqiza imikhiqizo yama-hemp ekilasi lamagama. Ngemuva nangaphambi kokuvunwa kwezitshalo zethu ze-hemp, abalimi bethu bahlola izinto zokutshala ukuqinisekisa ukuthi azinaso isikhunta, isikhunta, noma izinsimbi ezisindayo.
Ngemuva kokuthi inqubo yokuhlola isiqediwe, abalimi bethu bathumela futhi bacubungule izinto zezitshalo ezicebile ze-phytocannabinoid kwenye yezikhungo zethu zokukhipha ezinelayisense abese beguqula imikhiqizo ibe yimikhiqizo yethu ye-CBD esezingeni lomhlaba.
Imikhiqizo yethu eqediwe ikhiqizwa kusetshenziswa izinqubo eziqinisekiswe nge-ISO noma i-GMP. Izinhlobo zethu eziyingqayizivele nezinegunya lobunikazi be-CBD ephezulu ne-THC insangu ephansi ikhiqiza ama-cannabinoids nemvelo ye-terpenes ngokwemvelo kunanoma imuphi umugqa ofanayo we-landrace noma we-hemp otholakala e-Chinese noma e-European hemp yezimboni.
Ngenkathi ezinye izinkampani zazala izinhlobo zama-cannabis ukuze zikhiqize i-THC ethe xaxa, ithimba lethu lezofuzo lalakha izingcungcu zensangu ukukhiqiza i-LESS THC ukukhiqiza izingcindezi ezingezona eze-psychotropic cannabinoid ezinjenge-CBD, i-CBG, i-CBN, IDelta 8 iTHC, kanye neCBC
Yonke imikhiqizo yethu yenzelwe ukufaka inani eligcwele lama-cannabinoids nama-terpenes, futhi wonke umkhiqizo we-Red Emperor CBD & Delta 8 THC uqinisekiswa ilebhu ezimele evela eceleni ukuqinisekisa imikhiqizo ephephile, engaguquguquki futhi enamandla amakhulu avumela amakhasimende ethu ukuze siphile impilo ejabulisayo nenempilo.
Sesha Amabhulogi Wethu Akamuva
Amabhulogi Akithi Akamuva
I-Delta 8 THC nokunciphisa umzimba
Umbiko Wobuhlakani WENYANGA KA-Agent Freak Nasty 8-30-2021
I-Agent Freak Nasty Umbiko Wobuhlakani WENYANGA 7-25-2021
Umbiko we-Agent Freak Nasty Weekly Intelligence Report 6-27-2021
ITexas Igunyaza Imikhiqizo ye-Delta 8 THC
Okusha: Izimangalo Zokufundwa Izilinganiso Ezinkulu ze-CBD Zisiza Izinduku Zinciphise Ukutholwa Kwemeth